Serivisy sy masoivohon'ny serivisy China Express | Sunson
Ny fandefasana azy amin'ny kaontinao manokana dia lafo loatra? Ka maninona raha alefa amin'ny volantsika? Manome serivisy ho an'ny mpanjifa izahay toa ny DHL, UPS ary EMS amin'ny fihenam-bidy. Fanaterana haingana kokoa amin'ny taha ara-toekarena, mendrika hampiasainao ianao.
DHL dia sampana iray an'ny Deutsche Post DHL, vondrona paositra sy logista malaza eran'izao tontolo izao. Izy io dia ahitana an'ireto sehatr'asa manaraka ireto: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight ary DHL Supply Chain. Tamin'ny 1969, DHL dia nanokatra ny làlany fandefasana entana voalohany avy any San Francisco mankany Honolulu. Nanomboka teo dia nitohy nitombo tamin'ny hafainganam-pandeha mahavariana izy io ary nanjary mpitarika tsena amin'ny indostrian'ny fandefasana entana manerantany. Azo alefa any amin'ny firenena 220 sy faritra erak'izao tontolo izao izy io, izay mahatratra 120000 ny toerana itodiana (faritry ny kaodim-paositra) ary manome serivisy mpandefa iraka sy mpandraharaha amin'ireo mpanjifa orinasa sy tsy miankina. Na antontan-taratasy izany na fonosana iray, na amin'ny andro iray ihany no anaterana azy, ao anatin'ny fetra voafetra na ao anatin'ny andro voafetra, DHL International Express dia afaka manome serivisy mifanaraka amin'ny ilainao. Ara-dalàna ny vidiny ary haingana ny fandefasana. Izy io dia tolotra iraisam-pirenena tianao indrindra.
UPS International Express dia natsangana tany Etazonia ary izy no orinasa mpanatitra parcel lehibe indrindra manerantany. Izy dia manolo-tena amin'ny fanohanana ny fampandrosoana ny asa manerantany. Izy io koa dia mpamatsy serivisy fitaterana, logistika ary serivisy e-varotra matihanina, manompo firenena sy faritra maherin'ny 220, hanomezana anao tolotra avo lenta sy haingana.
Ny serivisy Fedex dia mizara ho karazana laharam-pahamehana (IP) sy karazana toekarena (IE), serivisy maneho laharam-pahamehana (IP): fotoana fanovozan-kevitra 2-5 andro fiasana, serivisy an-tsokosoko (IE): fotoana fohy 3-7 andro fiasana, io no orinasam-pitaterana entana lehibe indrindra eran-tany, manompo firenena sy faritra maherin'ny 220 manerantany. Izy io dia serivisy iraisam-pirenena misokatra, azo antoka ary azo itokisana, haingana, isan-trano. Izy io dia mety amin'ny fitaterana fandefasana entana sarobidy sy sarobidy amin'ny fotoana ary manome serivisy mazava sy azo antoka.
EMS International Express (Worldwide Express Mail Service) dia serivisy mailaka iraisam-pirenena tantanan'ny UPU. Ny orinasa EMS international express dia manana zon'ny fanodinana laharam-pahamehana amin'ny paositra, fadin-tseranana, fiaramanidina ary departemanta hafa. Haingam-pandeha sy avo lenta ny fandefasana taratasy maika, antontan-taratasy, faktiora ara-bola, santionan'ny entam-barotra ary antontan-taratasy sy fitaovana hafa ho an'ny mpampiasa. Ny EMS international Express dia tsy mitaky fandoavana solika fanampiny ary mety hahatratra 210 ny tanjona erak'izao tontolo izao. Ny fahaizan'ny fadin-tseranana mazava dia matanjaka, ary ny fadin-tseranana dia niray hina tamin'ny alàlan'ny paositra.
Serivisy fitaterana an'izao tontolo izao Express
Karazana tolotra mivantana serivisy mivantana
Serivisy fanatobiana entana any Chine